Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf Oo la kulmay Wafdiga QM (Masawiro)
Gaalkacyo:-Wafdi uu horkacayo Ergeyga QM u qaabilsan arimaha Soomaaliya Nichalos Haysom iyo Wakiilka Midowga Afrika ee u qaabilsan arimaha Soomaaliya Francisco Madeira ayaa maanta waxaa ay soo gaareen magaalada Galkacyo waxayna kulan la qaateen madaxada Galmudug.
Wafdiga ka socda QM iyo Midowga Afrika ayaa waxaa ay kulan la qaateen Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf waxaana madaxweynaha Galmudug kulanka ku weheliyey Madaxa Xukuumada iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada Galmudug .
Wafdiga ka socda QM iyo Midowga Afrika iyo Galmudg ayaa waxaa ay ka wada hadleen xal u helida khilaafka DFS iyo Maamul Gobaleedyada Soomaaliya. Waxaa kale oo kulanka Galmudug iyo wafdiga ka socday QM looga hadlay faragalinta madaxada DFS ku hayaan Maamulka Galmudug.
Axmed Ducaale Geele Xaaf Madaxweynaha Galmudug ayaa markii uu soo dhamaaday kulanka waxaa uu la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in ay wafdiga QM kala hadleen arimo badan oo ay ugu horeyso faragalinta Madaxda DFS ku heyso Galmudug.
Ergeyga QM u qaabilsan arimaha Soomaaliya Nichalos Haysom iyo wafdigiisa ayaa waxay kulamo kala duwan la soo qaateen Madaxada S/land ,Puntland, Jubaland,K/galbeed iyo Galmudug .
232,813 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress